अब कहिल्यै पनि हेर्न पाइने छैन ‘तितो सत्य, जीरे खुर्सानी र मेरी बास्सै’ « Npnews
अब कहिल्यै पनि हेर्न पाइने छैन ‘तितो सत्य, जीरे खुर्सानी र मेरी बास्सै’
काठमाडौः मिडिया हब र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा चलेका केही लोकप्रिय हास्य टेलीशृंखला बन्द भएपछि कलाकारहरू के गर्दै होलान् ? सधैं टेलिभिजनमा हेरिरहेका कलाकारको नियास्रो दर्शकलाई अवश्य पनि लागेको होला तर अधिकांश कलाकारले आआफ्नै बाटो समाएका छन् ।
१२ वर्षसम्म टेलिभिजनमा रुचाइएको कार्यक्रम ‘तीतो सत्य’का निर्देशक तथा कलाकार दीपकराज गिरी र दीपा श्री निरौला चलचित्र निर्माण, निर्देशन एवं अभिनयतिर व्यस्त छन् । छ एकान छ, वडा नम्बर छ र छक्कापन्जाबाट उनीहरूले टेलिचलचित्रमा जस्तै चलचित्र उद्योगमा पनि सफलता पाएका छन् ।
टेलिचलचित्रको कामलाई केही समय थाती राखेर चलचित्रमा काम गर्ने जाँगर बोकेर उनीहरू यतातिर लम्किएका हुन् । आफू स्थापित हुनुका साथै चलचित्रलाई पनि नयाँ स्वादमा पस्किने योजना उनीहरूको थियो ।
हरेक हप्ता स्क्रिप्ट लेख्ने, सुटिङ गर्ने व्यस्त समय तालिकाबाट अहिले राहत महसुस भएको छ । ‘अहिले ढुक्क भएको छ’, दीपकले भने । टेलिभिजनमा राम्रो छाप बनाएको तीतो सत्य समूहबाट दर्शकको अपेक्षा बढेको छ ।
कला क्षेत्रमा स्थापित गराएको टेलिभिजनमा फर्कने योजना भने छँदैछ । दीपक भन्छन्, ‘राम्रो इतिहास बनाएपछि अब कमजोर सिर्जना गर्नु हुँदैन ।’ टेलिभिजन उनका लागि पाठशाला हो । त्यही पाठशालामा पढेर उनीहरूले राम्रो चलचित्र निर्माण गर्न सकेका हुन् । लोकप्रियताको शिखरमा पुगेर टेलिचलचित्र छोड्नु सही समय थियो । अझै त्यही ढंगले अघि बढिरहेको भए तीतो सत्यको लोकप्रियता घट्ने थियो ।
दीपकलाई सही समयमा छोडेको भान भइरहेछ । ठूलो पर्दामा नआएको भए यो सन्तुष्टि मिल्दैनथ्यो । टेलिचलचित्र ‘जिरे खुर्सानी’को समूह पनि खाली बसेको छैन । जितु नेपाललाई स्टेज कार्यक्रमबाट फुर्सद छैन । उनको समूहका केही साथी अमेरिका पुगेका छन् त केही साथी आआफ्नै हिसाबले कलाकारितालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
जितु स्टेज कार्यक्रममा मात्र नभई चलचित्रमा पनि उत्तिकै व्यस्त छन् । तापनि टेलिभिजनमा हरेक साता पर्खेर जिरे खुर्सानी हेर्ने दर्शकसँग टाढा भएको महसुस भने उनले गरिरहेका छन् । जहाँ पुगे पनि उनलाई एउटै प्रश्न सोधिन्छ, ‘ठूलो पर्दामा आएर सानो पर्दामा नआउने ? ’
हरेक साता स्क्रिप्ट लेख्ने, सुटिङ गर्ने व्यस्त समय तालिकाबाट अहिले राहत महसुस भएको छ । तर राम्रो इतिहास बनाएपछि अब कमजोर सिर्जना गर्नु हुँदैन । दीपकराज गिरी
टेलीशृंखला चल्दा दैनिक व्यस्त हुन्थ्यौं । अहिले पनि स्टेज कार्यक्रम र चलचित्रमा व्यस्त छु तर दर्शकले एउटा प्रश्न सोधिरहन्छ, सानो पर्दामा नआउने ? जितु नेपाल
मेरी बास्सै बन्द भए पनि धुर्मुस सुन्तली बन्द भएको छैन । सामाजिक कार्य गर्न थालेका छौं । यसबाट पाएको हौसलाले सामाजिक काम र कलाकारितालाई सँगै लैजाने जाँगर थपिदिएको छ । कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’
धेरैले टेलिभिजनमा हराएका उनीहरूलाई ‘फेरि फर्किएर नआउने पो हो कि’ भन्ने जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् । टेलिभिजनमा हरेक साताको शृंखला तयार गर्दाको कामको रफ्तारभन्दा अहिलेको कामको रफ्तार घटेको छ ।
स्टेजमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, पैसा पनि राम्रै कमाइ हुन्छ तर टेलिभिजनको काममा बेग्लै सन्तुष्टि हुन्थ्यो । उनी भन्छन्, ‘दैनिक काम गर्दा व्यस्त हुन्थ्यौं, सिर्जना जति घोट्यो त्यति राम्रो हुने हो ।’
टेलिभिजनबाटै बाँधिएको जोडी सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’को खबर सञ्चारमाध्यममा छाइरहन्छ । कलाकारितामा स्थापित जोडी अहिले समाजसेवातिर लागेका छन् । उनीहरूको कलाकारिता मनोरञ्जनमात्र नभई समाजसेवा बनेको छ ।
भूकम्पपछि नमुना बस्ती निर्माणमा लागेको यो जोडीले स्टेज कार्यक्रममार्फत कलाकारितालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । देशविदेशका कार्यक्रममा जाँदा उनीहरू ‘धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन’का लागि रकम जुटाइहेका छन्, जुन रकमले नमुना बस्ती निर्माण भइरहेको छ ।
अहिले बर्दियामा मुसहर बस्ती निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कुञ्जना भन्छिन्, ‘मेरी बास्सै बन्द भए पनि धुर्मुस सुन्तली बन्द भएको छैन ।’ सामाजिक कार्य गर्न थालेपछि सर्वसाधारणले उनीहरूबाट गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
यसलाई उनीहरू हौसलाका रूपमा लिन्छन् । भन्छिन्, ‘यही हौसलाले सामाजिक काम र कलाकारितालाई सँगै लैजाने जाँगर थपिदिएको छ ।’
लोडसेडिङ घटेको समयमा दर्शकमा टेलिभिजनमोह भने बढेको छ । राम्रो सम्झौता भयो भने मेरी बास्सैलाई निरन्तरता दिने योजनामा छन् उनीहरू । सम्झौता नभए पनि नयाँ केही लिएर आउने योजना समेत बनाइरहेका छन् ।
मेरी बास्सै समूहका केही कलाकार अन्य कार्यक्रममा अभिनय गरिरहेका छन् । केही कलाकार धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनमा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । किरण केसी ‘राता मकै’ विदेशका कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।
फागुनदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर नेपाल टुर गर्दैछन् । उनी पनि ठूलो पर्दाकै तयारीमा छन् । चलचित्रको काम चैतदेखि सुरु गर्ने योजना भइरहेको छ । टेलिभिजनबाटै चिनिएका उनले टेलिभिजन छोड्न कहाँ सक्छन् र ? टेलिभिजन कार्यक्रमको तयारी पनि भइरहेको छ ।
-अन्नपुर्ण पोष्ट बाट